चुनावबाट पछि हट्न मलाई धम्क्याइयो : डा. देवकोटा - समय-समाचार
चुनावबाट पछि हट्न मलाई धम्क्याइयो : डा. देवकोटा
समय-समाचार आईतबार, २०७८ जेठ ९ गते, १४:१३ मा प्रकाशित
काठमाडौं । राष्ट्रियसभा सदस्य डा. खिमलाल देवकोटाले चुनावबाट पछि हट्न आफुलाई धम्क्याएको खुलासा गरेका छन् । राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा बिजयी बनेका देवकोटाले सामाजिक सञ्जालमा देवकोटाले आफुलाई चुनाव नलड्न कसैले फकाएको र कसैले थर्काएको बताएका छन् ।
उनले केहीको आवाजको रेकर्ड नै राखेको बताउँदै उनले आवश्यक परेमा नाम पनि भन्ने बताएका छन् । उनले आफू विचलित भएको भए आफ्नो मात्र नभई आफूजस्ता स्वतन्त्र रुपमा कलम चलाउने वुद्धिजीवीहरुको इज्जत प्रतिष्ठा जाने थियो भन्दै उनले आफू अडिग रहेको बताएका छन् ।